Ny i Östergötland - Ku cusub Östergötland - Aqoon dheeri ah oo ku saabsan Iswiidhan iyo Östergötland
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Iswiidhan iyo Östergötland
Websaydka Maamulka Gudiga 'Information Sweden' waxaad ka helaysaa macluumaad aad u wanaagsan oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad uga shaqeyso Iswiidhan. Halkan waxaad ka heli kartaa, waxyaabo kale, kala soo bixi kartaa "Boken om Sverige" ama qalab kala duwan iyo qalab aad ku bilaabi karto kuna baran karto iswidhishka wanaagsan kaligaa.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga internetka https://www.informationsverige.se
Gobolka Östergötland wuxuu mas'uul ka yahay, waxyaabo ay ka mid yihiin, daryeelka caafimaadka, daryeelka ilkaha, gaadiidka dadweynaha, horumarka gobolka iyo siyaasada waarta ee gobolka Östergötland. Websaydhka, waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan meelaha ay hay'addu la shaqeyso.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga internetka https://www.regionostergotland.se/
1177 Vårdguiden waa degel iyo adeeg taleefan oo leh macluumaad, talo iyo adeegyo ku saabsan caafimaadka iyo daryeelka. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa cudurada, baaritaanada iyo daaweynta. Waxaad ka heli doontaa macluumaadka xiriirka, saacadaha furitaanka iyo adeegyada elektaroonigga ah ee xarumaha caafimaadka iyo rugaha caafimaadka ee Östergötland iyo dalka intiisa kale. Waxaad ka gali kartaa 1177.se iyo tusaale ahaan, cusbooneysii cuntada iyo ballanta oo kansal garee.
Mer information finns på webbplatsen https://www.1177.se/Ostergotland/
Östgötatrafiken waxay mas'uul ka tahay gaadiidka dadweynaha ee Östergötland waxayna qorsheyneysaa khadadka iyo jadwalka basaska, tareenada iyo taraamyada gobolka oo dhan. Websaytka Östgötatrafiken waxaa laga heli karaa iyadoo la turjumay Google. Waqtiyada bixitaanka waxaa laga raadin karaa qorsheeyaha safarka iyo jadwal dhaqameedyo ku saabsan websaydhkooda iyo barnaamijkooda.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga internetka https://www.ostgotatrafiken.se/
Gudaha Östergötland waxaa ku yaalo 44 maktabadood iyo seddex basaska buugaagta oo ku baahsan Östergötland! Intaa waxaa dheer, waxaa jira maktabad jaamacadeed oo u qaybsan maktabado dhowr ah oo ku yaal Linköping iyo Norrköping. Yar iyo weynba, qofwalba wuxuu kuxiranyahay shabakad, si dhaqso leh oo fududna buugaag ayuu isugu dirayaa. Sidaa darteed, waxaad ka amaahan kartaa waxaad rabto maktabad kasta. Hubso inaad sheegto maktabadda aad rabto inaad ka soo qaadato waxa aad keydisay. Götabiblioteken waxaad ku keydin kartaa buugaagta aad rabto inaad amaahato ama aad kala soo baxdo si dijitaal ah.
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga internetka https://www.gotabiblioteken.se/